गैरी खेतको सिरै हान्यो – ओरिजिनल भर्सेस रक – संगीतसंसार डट कम | Sangeet Sansar
Asha Bhosle - the singer of Gairi khetko sirai hanyo
१९९५ मा चलचित्र प्रेम पिण्डको लागि आशा भोस्ले द्वारा गाइएको यो गीत (गैरी खेतको सिरै हान्यो ) अझै पनि नेपाली संगीत प्रेमीको मानसपटलमा ताजै छ । यादव खरेल द्वारा लिखित अत्यन्त मार्मिक सब्द, सम्बुजित बास्कोटाको ओजस्वी संगीत अनि आशा भोस्लेको दमदार स्वोर नै यो गीत को मुख्य आकर्षण हो । त्यसैले होला आजको समयमा पनि यो गीत त्यतिकै ताजा अनि चर्चित छ । चलचित्र प्रेम पिण्डको लागि तयार पारिएको यो गीत मा सुन्नी रौनियार आकर्सक नृत्य रहेको छ ।
[media url=”http://www.youtube.com/watch?v=RYYEdU8X-ss” width=”600″ height=”400″]
Gairi Khet ko Sirai hanyo – Asha Bhosle -Prem Pinda – Nepali Movie Full Original Song
बर्षौंपछी समृत ल्वागुन ले सोहि गीतलाई गितार धुनमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छन् । अहिलेको युवा पुस्तमाझ चर्चित रहेको रक बिधामा यो गीतलाई ढालिएको छ । राम्रो गीत-संगीत लाई जुनसुकै बिधामा रुपान्तरित गरेपनि राम्रै सुनिन्छ भन्ने भनाइलाई यो गितार धुनले सहि साबित गरेको छ । जब तपाई यो धुन सुन्नु हुन्छ तपाइहरुले यो धुनमा पनि त्यही मिधास पाउनुहुन्छ । यो धुनले पनि चर्चा पाओस, समृत ल्वागुन को मेहेनत को सहि कदर होस् संगीतसंसर कामना गर्दछ । यहाँहरुको सल्ला सुझाव अनि प्रतिक्रिया को अपेक्षा गर्दछौं ।
प्रस्तुत छ गैरी खेतको सिरै हान्यो रक बिधामा – Gairi Khet Ko Rock Version – Gairi Rocks by Samrit Lwagun !
[media url=”http://www.youtube.com/watch?v=A6uGSSY1_es” width=”600″ height=”400″]
तपाइलाई यो गैरीखेतको सिरै हान्योको ओरिजिनल र रक भर्जनमा कुन चाहिँ मन पर्यो, कृपया कमेन्ट गर्दिनु होला ।
Asha BhosleInstrumentalSambhujit BaskotaSamrit LwagunYadav Kharel
Suprina Shrestha says6years ago
compare गर्ने मिल्दैन… ओरिजिनलमा आफ्नै मिठास छ.. n this rock version givesadifferent taste.. तर original गीत माथि अन्याय चै गरेको छैन जस्तो लग्यो…. liked listening to it again n again..